Iyo yakanyanya kusarudzwa yezvakavanzika zvinyorwa
Chakavanzika runyorwa wongororo
Chiratidzo cheMuchinjikwa naGlenn Cooper
Yakanga yave nguva refu kubva pandakasangana nenyaya yezvishorwa zvechiKristu izvo zvinogara zvichinongedza kune zvemweya sendangariro yeatavistic yeavo vakasarudzwa naMwari. Saka zvakakosha kunongedzera chirongwa ichi kuti nhasi chinowana nyaya nyowani yehutsvene hwakavandudzwa, yesarudzo ...
Mabhuku matatu akanakisa e Agatha Christie
Kune dzakakomberedzwa ndangariro dzinokwanisa kubvunza chiuru uye chimwe zvirongwa pamwe chete nezvakavanzika zvavo zvisina kuvhiringidzwa kana kusakara. Hazvina mubvunzo kunongedza Agatha Christie samambokadzi werudzi rweDetective, uyo akazobatana mumabhuku ehutsotsi, anonakidza nezvimwe. Iye ega, uye pasina rubatsiro rukuru rwevose ...
Mabhuku matatu akanakisa naCarlos Ruiz Zafón
1964 - 2020 (Mumwe wevanyori vanotengesa zvakanyanya atisiya. Zvichida munyori anonyanya kuverengerwa wechiSpanish mushure meCervantes, pamwe nemvumo yaPérez Reverte) Kumuka kwemunyori senyika inotengesa zvakanyanya hakuzi ruva rezuva. Carlos Ruiz Zafón, sevamwe vazhinji, ...
Hazvina kumboitwa naKen Follett
Zvinotaridza kuti Ken Follett pamberi pezvakanyanya nhoroondo zvekunyepa adzoka. Uye ndiko kudzoreredza kunotipinza mukati memakore ekuma90. Inguva yakakwana kune avo vedu vatove vakakomberedza zera risingafungidzike. Uye ndosaka isu vedu vatoverengera Ken Follet pamberi ...
Imba yeManzwi, naDonato Carrisi
Akanaka akura Donato Carrisi anogara achitifadza nemahybrids pakati enigmas nematsotsi, rudzi rweyakavanzika genre iyo inopedzisira ichityora kunge yakazara-inopepereswa noir. Iko kusarongeka kunogara kuri kubudirira kana zvichikwanisika kusanganisa zvakanakisa chikamu chimwe nechimwe. Uye zvechokwadi, sekusiya kunoita mumwe ...
Zvipfeko zvinotyisa, naEria Barceló
Inofanirwa kuve mufaro mukuru kugona kuita kuburitsazve kuburikidza nemusuwo wepamberi, mune yakakurumbira chirongwa chekurumbidza. Uye Elia Barceló anotsvaga kuzvivanza zvinotyisa zvake kuti anyaradze kuverenga kwake kuruzhinji, achishuvira zvirongwa zvakaitwa muBarceló. Uye chokwadi ndechekuti zano iri rinobva pamaparera kuti rienzane ...
Peji1 Peji2 ... Peji13 Zvadaro →